(မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သော နက်နဲမှုကို သင် နားလည်ပါသလော
သခင်ပြန်ကြွလာခြင်းကို စောင့်မျှော်နေကြသည့် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှု ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းကူညီထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
1092 ပိုမိုပြသရန် 291
သခင့်ကို ယုံကြည်သူများစွာတို့က သခင်သည် မိုးတိမ်နှင့်အတူ ဆင်းကြွ၍၊ လူအားလုံးတို့ထံ ပေါ်ထွန်းကာ၊ ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ပြန်ကြွလာမည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် မိုးတိမ်ပေါ်မှ သခင် ကြွဆင်းလာရန်၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ချီဆောင်ခံရပြီး ကိုယ်တော်နှင့် ဆုံတွေ့ရန် စောင့်မျှော်ရင်းဖြင့်၊ ကောင်းကင်မှ မိုးတိမ်များကို အမြဲ ငေးကြည့်နေကြသည်။ ဤယုံကြည်မှုသည် သမ္မာတရားနှင့် ကိုက်ညီပါသလော။ ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့် အမှုတော်ကို တစ်ဦးတစ်ယောက်က မည်သို့ နားလည်သင့်သနည်း။ ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းတွင် မည်သို့သော နက်နဲမှုအမျိုးအစားများ ပါရှိသနည်း။
ယခုတွင် ကပ်ဘေးများသည် မကြာခဏဖြစ်ပွားနေသည်ဖြစ်၍ ကပ်ဘေးကြီး မကျရောက်ခင် သခင့်ကို ဘယ်လိုကြိုဆိုရမှာလဲ? ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ချီဆောင်ခြင်းကို ဘယ်လိုရရှိနိုင်မှာလဲ? အောင်ပါဖော်ပြထားသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်၊ လမ်းစဉ်ကို အတူတကွ ရှာဖွေကြရအောင်။
Brighten Christian Movie (မြို့တော် ကျဆုံးလိမ့်မည်) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို (၂) သူတော်ကြောင်ဖာရိရှဲတို့သည် အဘယ်ကြောင့် အမင်္ဂလာ ရှိကြသနည်း။
ခြေချင်းများကိုချိုးဖျက်၍ ပြေးပါ - သမ္မာကျမ်းစာထဲက ရှိရှိသမျှဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲလား။ (အပိုင်း ၂/၄)
ခြေချင်းများကိုချိုးဖျက်၍ ပြေးပါ - ခြေချင်းများကိုစွန့်ပစ်ပြီး သမ္မာတရားလမ်းကို လေ့လာပါ (အပိုင်း ၁/၄)
(ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟူသော ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ခြင်းအိပ်မက်) ဇာတ်လမ်းတို- ခရစ်တော်၏ပလ္လင်တော်ရှေ့၌ စီရင်ခြင်းအမှုတော်နှင့် – ထာဝရအသက်ဆိုင်ရာ သက်သေခံဒေသနာများ
(ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟူသော ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ခြင်းအိပ်မက်) ဇာတ်လမ်းတို- ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် မည်သည့်အရပ်၌ – ကျိန်းသေတည်ရှိသနည်း
(ကလေးရေ၊ အိမ်ပြန်လာပါ) အဘယ်ကြောင့် ကမ္ဘာလောကသည် အလွန်မှောင်မိုက်ပြီး ဆိုးယုတ်ရပါသနည်း။ – အပိုင်း (၂)
(နာကြည်းဖွယ်ရာအမှတ်တရများ) ကယ်တင်ခြင်း ခံရခြင်းနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းတို့ကြားရှိ ဆက်နွယ်ပုံသည် အတိအကျ မည်သို့ဖြစ်သနည်း။ – အပိုင်း (၄)
(ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) သခင့်အတွက် ဒုက္ခသုခခံ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ သခင့်အပေါ် ယုံကြည်မှု၏ လက်တွေ့ဘဝပေလား။ – အပိုင်း (၅)
ကျွန်တော့်သခင် ဘယ်သူလဲ – ဘုရားသခင်၏ ခြေလှမ်းများကို လိုက်လျှောက်သောသူတို့သာ ထာဝရအသက်လမ်းကို ရရှိနိုင်သည် – ရုပ်ရှင်ကလစ် ၅
ဘုရားသခင် မြေကြီးပေါ်ကြွလာခြင်း နှင့် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်ခြင်း
Chinese Gospel Music Video | ဘုရားသခင်သည် သင်ဆိုသကဲ့သို့ ရိုးရှင်းသလောကျူး | Myanmar Lyrics
ကမ္ဘာမြေကြီးအား ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်း အမှု နှင့် လူသားမျိုးနွယ်အား ဦးဆောင်ပြီး ရွေးနှုတ်ခြင်း အကြောင်း မှတ်တမ်း တစ်ခု
လူသားမျိုးနွယ်၏ အစအဦး နှင့် အနာဂတ်ကို ဘုရားသခင် အုပ်စိုးခြင်း
ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက် ကျွန်တော် ချီဆောင်ခံလိုက်ရပြီ
ယခုတွင် ကပ်ဘေးများသည် မကြာခဏဖြစ်ပွားနေသည်ဖြစ်၍ မိတ်ဆွေသည် ကပ်ဘေးမတိုင်ခင် သခင့်ကို ကြိုဆိုပြီး ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းကို ရှာတွေ့ပြီလား ? ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုင်းပေါ်ရှိ မိတ်သဟာယကို အခမဲ့ ပါဝင်ပြီး အဖြေကို ရှာတွေ့နိုင်သည်။
Messenger မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ→
Copyright © 2021 ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်း.လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံး မူပိုင်ဖြစ်သည်။.